thinzar's blog: ကျမနှင့် ဘလော့ဂ် ပြသနာ
ကျွန်တော် စမ်းကြည့်သလောက်တော့ Live Writer က ဂွတ်တယ်။ wordpress account နဲ့ စမ်းရင် template တွေပါ တစ်ခါတည်း ဆွဲချပေးလို့ publish လုပ်ရင် ဘယ်လို အနေအထားရှိတယ် ဆိုတာ ကြိုသိတယ်။ blogger အသစ် နဲ့ စမ်းတော့ image ပါရင် တင်လို့မရဘူး။ အဲ့ဒိပြသနာပဲ ရှိတာ။
15/5/07 9:16 AM
Image တင်လို့ မရဘူးဆိုတော့ mail-to-blogger နဲ့ အတူတူဘဲပေါ့။ ဟုတ်လား?? ဂွတ်တယ်ဆိုတော့ သုံးကြည့်ဦးမှဘဲ..
18/5/07 3:40 PM
I think because of Picasa and Blogger API.
19/5/07 12:32 PM
By the way, I links to your blog. If you don't like, please let me know.
19/5/07 12:33 PM
ko myochauhtun >> :) I don't hv any reason to "not like" being linked. thanksalot..
21/5/07 10:16 PM